Ingabe Ukuhlala Ubusuku Bonke Kusetha Kabusha Umjikelezo Wami Wokulala - BikeHike
Ingabe Ukuhlala Ubusuku Bonke Kusetha Kabusha Umjikelezo Wami Wokulala
Ngiwenza kanjani kabusha umjikelezo wami wokulala ebusuku?
Ngihlale ngilele uma ngingalali?
Ingabe ubusuku obubodwa bungamosha ishejuli yakho yokulala?
Ingabe ukudonsa ubusuku bonke kungalungisa ishejuli yakho yokulala?
Uwunqamula kanjani umjikelezo omubi wokulala?
Ingabe kubi ukuthola kuphela amahora angu-4 okulala njalo ebusuku?
Ingabe ukulala unamehlo avaliwe kubalwa njengokuphumula?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukululama ku-All nighter?
Ingabe i-melatonin ingakwazi ukusetha kabusha umjikelezo wokulala?
Ngilenza kanjani kabusha iwashi lomzimba wami?
Ingabe ubusuku bonke bubi?
Ingabe kufanele uhlale usuku lonke ukuze ulungise isimiso sokulala?
Ngizilungisa kanjani ngingalali ubusuku bonke?
Ingabe ukuvuka njalo ngamahora ama-2 kujwayelekile?
Ngiwuqeda kanjani umjikelezo wokuvuka ekuseni kakhulu?
Kungani ngivuka njalo ebusuku ngabo-3am?
U-Elon Musk ulala amahora amangaki?
Ngingalala kanjani amahora angu-8 emahoreni ama-2?
Ingabe amahora angu-5 okulala angcono kunokungalali?
Cha, ukuhlala uphapheme ngamabomu ubusuku bonke noma ukulala ngezimpelaviki ngeke kulungise isimiso sakho sokulala. Eqinisweni, ukwenza lezi zinto kungase kukulahlekisele nakakhulu isimiso sakho sokulala.
Amathiphu angu-10 Okusetha Kabusha Isheduli Yakho Yokulala Lungisa isikhathi sakho sokulala, kodwa yiba nesineke. Ungalali, ngisho noma uzizwa ukhathele. Ungalali, futhi uvuke ngesikhathi esifanayo usuku ngalunye. Yiba oqinile mayelana nokunamathela kushejuli yakho yokulala. Gwema ukuchayeka ekukhanyeni ngaphambi kokuthi ufune ukulala. Gwema ukudla noma ukuzivocavoca eduze kakhulu nesikhathi sokulala.
Uma ungalali, ukozela kwakho kuzoqhubeka kuba kubi kakhulu uze ukwazi ukuphumula. Ukulala amahora angu-1 kuye kwayi-2 kunganciphisa ingcindezi yokulala futhi kukwenze uzizwe ungakhathali kakhulu ekuseni kunokuba ubungenza ngokuhlala ubusuku bonke.
Ngemva kobusuku obungaphumuli abantu bacabanga ukuthi bangakwazi ukuvala ubuthongo obulahlekile ngokusheshe balale futhi balale ngakusasa. Lokhu ngokuqinisekile kusiza abantu bazizwe bephumule, kodwa ucwaningo olusha luthola ukuthi ubusuku obubodwa nje bokungalali bunomthelela omubi kumetabolism kanye namawashi ebhayoloji eselula.
Imibuthano emnyama, izikhwama ngaphansi kwamehlo, ukuzamula njalo, kanye nomshikashika wokugcina amehlo akho evulekile konke kungalindelwa lapho udonsa ubusuku bonke ukuze ulungise isimiso sakho sokulala. Kodwa, ngale kwemiphumela esobala, yesikhashana emzimbeni wakho, ukuhlala ubusuku bonke kungaba nemiphumela yesikhathi eside emzimbeni wakho.
Lapha sizofaka izindlela ezithile zokusetha kabusha ishejuli yakho yokulala uma uzwa sengathi isigqi sakho sivaliwe. Bheka Ukukhanya Kwasekuseni. Vivinya umzimba izikhathi ezi-3-4 ngeviki. Lungisa Ishejuli Yakho Kancane Kancane. Gwema Ukukhanya Okuluhlaza Ngaphambi Kokulala. Ungathathi I-Naps. Gwema Ukudla Ngaphambi Kokulala. Yamukela Umjikelezo Wesikhathi Sokulala Esinethezekile. Thatha Uhambo Lokukhempa.
Abantu abalala ngaphansi kwamahora anconyiwe ayi-7 kuye kwayi-8 ubusuku ngabunye banamathuba amaningi okuthi baphathwe yizimo ezingapheli njengesifo senhliziyo, ukukhuluphala, ukudangala, isifo sikashukela kanye nokuwohloka komqondo, uFu nabanye ochwepheshe bathi.
Nakuba ukuphumula amehlo akho evaliwe kungawuqalisi umjikelezo wakho we-REM futhi kukuvumele ukuthi ubambe iwashi ngesikhathi esithile sokulala, kusakunikeza izinzuzo ezinkulu. Ukuvala amehlo akho kuthulisa ingqondo yakho futhi kuphumuze imisipha nezitho zakho. Abaningi babhekisela kukho ngokuthi "ukuphaphama okuthulile".
Kungumqondo omuhle futhi ukuthola okungenani amahora angu-7 kuya kwangu-8 okuphumula ubusuku ngabunye. Lokhu kuzosiza umzimba wakho ukuthi ubuyele esimisweni. Kungathatha izinsuku noma amasonto ukululama ekusweleni ubuthongo. Ihora elingu-1 nje lokulahlekelwa ubuthongo lidinga izinsuku ezi-4 ukuze lilulame.
Ubufakazi obuvela ocwaningweni oluncane bukhomba izithasiselo ze-melatonin njengezingase zisize ukusetha kabusha umjikelezo wokulala 7futhi uthuthukise ukulala kubantu abane-jet lag. Izisebenzi ze-shift - abantu abasebenza ebusuku - bavame ukubhekana nobunzima bokulala obuhlobene nesigqi esine-circadian esingaqondile.
Ngezansi kukhona amathiphu awusizo angakusiza ukuthi usethe kabusha iwashi lomzimba wakho futhi ujabulele i-shuteee yakho. Gwema ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka ebusuku. Phatha ukulala kwakho. Ungalali embhedeni uphapheme. Setha i-alamu. Yakha indawo efanele. Gwema ikhofi. Zivocavoce nsuku zonke. Zibekele Umjikelezo.
Ukuhlala ubusuku bonke kubi empilweni yakho engokomzimba ngoba kukuncisha ubuthongo obudingekayo. Ukungalali ngokwanele kanye nokulala ubusuku bonke kunganciphisa ukumelana komzimba wakho nokugula nokutheleleka. Ukungalali kahle kwekhwalithi nokungalali kahle kwandisa ingozi yakho ku-(3): Umfutho wegazi ophezulu.
Khetha isikhathi sokulala nesikhathi sokuvuka. Namathela kulezi zikhathi nsuku zonke, ngisho nangezimpelasonto noma ngezinsuku zokuphumula. Zama ukugwema ukuhlala noma ukulala isikhathi esingaphezu kwehora elilodwa kuya kwamabili. Ngokulandela ishejuli evamile, iwashi lakho langaphakathi lingakha umjikelezo omusha.
Uma kufanele uhlale ubusuku bonke, amathiphu alandelayo angakusiza ukuthi ukwenze ngokuphepha. Prakthiza. Indlela elula yokungalali ubusuku bonke ukusetha kabusha iwashi lakho langaphakathi. I-caffeine. Kodwa gwema iziphuzo ezinikeza amandla. Cambalala. Asukume anyakaze. Thola izibani ezikhanyayo. Sebenzisa amadivayisi akho. Geza ngesisefo.
Iningi lethu livuka izikhathi ezintathu kuya kwezine ebusuku ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, futhi lokhu kubhekwa njengengxenye yephethini evamile yokulala. Kodwa-ke, abaningi bethu bavuka njalo, ngezinye izikhathi ngisho namahora amabili kuya kwamathathu ebusuku. Lesi yisizathu sokukhathazeka.
Ungakuyeka kanjani ukuvuka ekuseni kakhulu ukuzivocavoca njalo. ukugwema i-caffeine nezinye izikhuthazi ngemva kwantambama (1 noma 2pm) ukuvimba ukukhanya ekamelweni lakho futhi uligcine lithule, limnyama, futhi linethezekile. ukumboza isibonisi ewashini lakho nanoma yiziphi ezinye izibani ezincane (noma ezicwayizayo) egumbini.
Uma uvuka ngo-3 am noma ngesinye isikhathi futhi ungakwazi ukuphinde ulale, kungase kube ngenxa yezizathu ezimbalwa. Lokhu kufaka phakathi imijikelezo yokulala elula, ingcindezi, noma izimo zempilo ezingaphansi. Ukuvuka kwakho ngo-3 am kungase kwenzeke ngokungavamile futhi kungabi yinto engathi sína, kodwa ubusuku obuvamile obufana nalolu bungaba uphawu lokuqwasha.
Ekuveleni kwakamuva ku-podcast ye-Joe Rogan Experience, u-Elon Musk uthe ulala cishe amahora ayisithupha njalo ebusuku-ngesidingo, kungenjalo umsebenzi wakhe uyahlupheka. Lokho kwamukelwa yi-Musk eqhutshwa yidatha kungokunye okufanele wonke umsunguli webhizinisi noma umphathi webhizinisi akubeke enhliziyweni.
Nokho, amasu alandelayo angase akusize udlule ezikhathini ezimfushane zokuntula ubuthongo. Zivocavoce kancane. Gwema isikhathi sesikrini ihora ngaphambi kokulala. Gcina izikrini nezinye iziphazamiso ngaphandle kwekamelo lakho lokulala. Qiniseka ukuthi igumbi lakho limnyama. Yehlisa ukudla okune-caffeine. Yidla ukudla okunempilo. Gwema utshwala.
Kwesinye isikhathi impilo iyafona futhi singalali ngokwanele. Kodwa amahora amahlanu okulala osukwini lwamahora angama-24 awanele, ikakhulukazi esikhathini eside. Ngokocwaningo lwango-2018 lwabantu abangaphezu kuka-10,000, amandla omzimba okusebenza ayehla uma ubuthongo bungekho ebangeni lamahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalombili.
Ingabe Ukuhlala Ubusuku Bonke Kusetha Kabusha Umjikelezo Wakho Wokulala
Impendulo Esheshayo: Ingabe Ukuhlala Ukusetha Kabusha Umjikelezo Wami Wokulala
Ingabe Ukuhlala Konke Kungase Kusethe Kabusha Umjikelezo Wakho Wokulala
Umbuzo: Ungawusetha Kanjani Umjikelezo Wokulala Ngobusuku Obubodwa
Umbuzo: Ungawenza Kanjani Kabusha Umjikelezo Wakho Wokulala Ngobusuku Obubodwa
Ingakwazi Ukusetha Kabusha Umjikelezo Wokulala I-Xanax
Umbuzo: Ingabe i-Melatonin Ingakwazi Ukusetha Kabusha Umjikelezo Wokulala
Impendulo Esheshayo: Ungakwazi Ukusetha Kabusha Umjikelezo Wakho Wokulala
Umbuzo: Ingabe I-Naps Setha Kabusha Umjikelezo Wakho Wokulala
Ingabe Ukuzila Kumisa Kabusha Umjikelezo Wakho Wokulala
Umbuzo: Isikhathi Esingakanani Sokusetha Kabusha Umjikelezo Wokulala
Umbuzo: Ungawusetha Kanjani Umjikelezo Wokulala Ngokushesha
Post Previous: Umbuzo: Ingabe Umjikelezo Owodwa We-Testosterone Uzokulimaza